सबैभन्दा ठूलो राष्ट्रिय झण्डा माइतीघर मण्डलामा - Everest Dainik - News from Nepal
सबैभन्दा ठूलो राष्ट्रिय झण्डा माइतीघर मण्डलामा
काठमाडौँ, माघ १६ । नेपालको सबभन्दा ठूलो राष्ट्रिय झण्डा आइतबार माइतीघर मण्डलामा फहराइएको छ ।
शहीद दिवसको अवसर नेपाली देशभक्त युवा समाजले आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र राष्ट्रकवि माधवप्रसाद घिमिरेले झन्डोत्तोलन गर्दै नेपालको राष्ट्रिय झण्डा फहराएका हुन् ।
फहराइएको झण्डा १० मिटर लामो र साढे ७ मिटर चौडाइ रहेको छ ।
राष्ट्रियतामा योगदान पु¥याएबापत उक्त कार्यक्रममा खेलाडी मिरा राई, कलाकार मोहनदास श्रेष्ठलगायत एक दर्जनलाई सम्मान गरिएको थियो
याे पनि पढ्नुस नेपालको झण्डा इटालीको ‘पिस वेल’ मा किन फहराइयो ?
केही वर्षयता नेपालको झण्डा नेपालीलाई प्यारो लाग्न थालेको भन्दै ओलीले केही स्वार्थी तत्वबाहेक सबैले देशलाई माया गर्ने बताए ।
पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका ओलीले जस्तोसुकै परिस्थिति आए पनि देशलाई टुक्रिन र कमजोर पनि हुन नदिने धारणा राखे । “हामी दुःख व्यहोर्न तयार छाँै । तर हेपिन र स्वाभिमान गिराउन तयार छैनौँ”– उनले भने– “सबै राष्ट्रप्रेमी एक ठाउँमा उभिएर स्वाभिमानको रक्षा गछौँ ।”
याे पनि पढ्नुस दश वर्षदेखिको सपना पूरा, घर अगाडी राखियो यति ठूलो नेपाली झण्डा ! (भिडियोसहित)
ओलीले देशको स्वाभिमान कसैका विरुद्ध पनि नलाग्ने भन्दै जनता र देशको पक्षमा रहेको बताए । उनले नेपाली काँग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र मधेसवादी दललाई राष्ट्रियताका सवालमा एमाले जस्तो नीति ल्याउन आग्रह गरे ।
उनले निर्वाचन नगर्ने प्रयास भइरहेको भन्दै जसरी पनि निर्वाचन गराएर छाड्ने ठोकुवा गरे । “निर्वाचन नगर्ने प्रयास भइरहेको छ”– उनले भने– “तर निर्वाचन गर्नका लागि आवश्यक दबाब दिने शक्ति हामीसँग छ । निर्वाचन गराएर छाड्छौँ ।”
कार्यक्रममा राष्ट्रकवि घिमिरेले अहिलेको पुस्ताले राष्ट्रितामाथि चासो राख्न थालेको बताए ।
ट्याग्स: big flag in maitighar, nepali flag